Ngabe iBluestacks iphephile? Yebo, Ungasebenzisa ku-Windows naku-Mac - Ama-Softwares
Noma kunjalo, ukufuna impendulo okususa konke ukungabaza kwakho ngokuphepha kwe-BlueStacks?Bese namhlanje ufike endaweni efanele. Yebo, ukuphendula lo mbuzo ngamafuphi ukuthi i-BlueStacks iphephile ukusebenzisa noma cha?
Kuphephile ukusebenzisa i-100%.Kepha uma usafuna ukufunda kabanzi ngeBlueStacks funda konke okuthunyelwe lapho senze khona ukuwohloka okuphelele futhi sichaze nemingcele ethile lapho i-BlueStacks iphephile ukuyisebenzisa.
Ukubuyekezwa kwe-Bluestacks - Imininingwane Ephelele
IBluestacks wuhlelo olulingisa isistimu yokusebenza ye-Android kudeskithophu yakho. Ngokuyinhloko, lolu hlelo lokusebenza luqhuba uhlelo lokusebenza lwe-Android ngaphezu kohlelo lwakho lokusebenza. Ungaqalisa zonke izinhlelo ze-Android ngokusebenzisa i-BlueStacks kudeskithophu.
IBlueStacks inesisetshenziswa esisebenzayo esakhiwa ngabasebenzisi abayizigidi ezingama-370 abayisebenzisayo. IBlueStacks ithandwa kakhulu phakathi kwamaGamers ngoba ibavumela ukuthi badlale umdlalo wabo abawuthandayo ongatholakali ku-PC ngokusebenzisa i-emulator, futhi udlale imidlalo efana ne-PUBG mobile , Ucingo lweDuty mobile, njll.
Uma i-BlueStacks ibingaphephile, khona-ke umuntu phakathi kwabasebenzisi abayizigidi ezingama-370 kungenzeka abike isiphazamisi, kodwa akunjalo ngoba akekho noyedwa obike noma yiliphi iphuzu mayelana neBluestacks.
Ufuna Ama-Emulators ahamba phambili we-Android Windows 10 ? Bheka kusuka ku- Ama-Emulators ingxenye.
Ngabe ama-BlueStacks Athiya Ukusebenza Kwe-PC Yakho?
Yebo, lo ngumbuzo obuzwa kakhulu, futhi kungenzeka ukuthi nawe useshe ngalokhu. Yebo, kukhona isethi yemininingwane edingekayo uma ufuna ukusebenzisa i-BlueStacks ku-PC yakho.Ukuze usebenzise ama-Bluestacks ku-PC, okungenani udinga inkumbulo engu-2 GB.
Abantu bavame ukufaka ama-BlueStacks ku-PC anezincazelo eziphansi futhi bagcina bevimba ukusebenza kwe-PC yabo.Kepha uma une-PC ephezulu ene-RAM enkulu kune-2 GB ne-processor yakamuva efakiwe, ama-Bluestacks ngeke akuvimbele ukusebenza kwe-PC yakho futhi izosebenza kahle.
Nayi imininingwane ethile oyidingayo uma ufuna ukusebenzisaI-BlueStacks kumawindiumshini:
Isistimu Esebenzayo:IWindows 7 nangaphezulu.
I-RAM: 3 GB noma ngaphezulu.
Isikhala sediski sangaphakathi:15 GB noma ngaphezulu.
Iprosesa:Noma iyiphi iprosesa ye-Intel noma ye-AMD.
I-GPU: Noma iyiphi iNvidia GPU ka-710 noma ngaphezulu izosebenza.
Nayi imininingwane ethile oyidingayo uma ufuna ukusebenzisaI-BlueStacks kwi-Mac:
Isistimu Esebenzayo:IMac OS Sierra nangaphezulu.
I-RAM: 4 GB noma ngaphezulu.
Iprosesa:Noma iyiphi iprosesa ye-Intel.
Ngabe ama-Bluestacks analo uHlelo Olubi?
Ukuhlola ukuthi ngabe iBlueStacks inalo yini uhlelo olubi noma cha sifake ama-BlueStacks kumakhompyutha ahlukene afakwe i-antivirus ehlukile kuyo njenge-QuickHeal, Norton 360, AVG, Avast, njll.
Isizathu esenza senze lokhu ukuthi noma nini lapho ufaka uhlelo oluthile kukhompyutha yakho i-antivirus yekhompyutha yakho iskena uhlelo ukubheka ukuthi kukhona yini umbhalo onobungozi. Uma iskripthi esibi sikhona kumakhodi womthombo wohlelo olufakiwe, i-antivirus izothumela umyalezo ngqo esikrinini sakho bese isusa uhlelo ngokuzenzekelayo.
Ngenkathi sikwenza lokhu, asikaze sithole noma yimuphi umbhalo onobungozi okhonjisiwe noma otholwe yi-antivirus kanye neBluestacks esebenza kahle.
Ngabe ukusebenzisa iBluestacks kusemthethweni?
Njengoba sonke sazi ukuthi, i-android uhlelo olusebenzayo lomthombo ovulekile futhi iBlueStacks iyi-emulator, elingisa noma isebenze uhlelo lwe-Android kudeskithophu yakho. I-Android uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile okusho ukuthi akekho ongakumangalela ngokuyisebenzisa. Ngakho-ke iBlueStacks isemthethweni ukusebenzisa.
Isiphetho - Ngabe iBluestacks iphephile?
Ngemuva kokuthola lokhu okuthunyelwe, sithole impendulo ethi 'Ingabe ama-Bluestacks aphephile?'
Impendulo ithiYEBO;Ikonakuphephe ngokuphelele ukusebenzisa i-BlueStacks. Asikaze sithole noma iyiphi inkinga ye-malware noma yokusebenza ngenkathi siyivivinya.
Noma zikhona ezinye izindlela ongazisebenzisa ukusebenzisa ama-Bluestacks ngokuphepha:
Landa iBlueStacks kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni kuphela. Ungayilandi kwiwebhusayithi yomuntu wesithathu. Sikunikeze isixhumanisi esisemthethweni seBlueStacks lapho ungasilanda khona.
Ungasebenzisi i-BlueStacks kwi-PC enezincazelo ezisezingeni eliphansi. Sifake uhlu lwezincazelo ngenhla oludingayo ukusebenzisa i-BlueStacks ngokushelela kumasistimu wakho we-Windows ne-Mac.
Uma usufake ama-BlueStacks kuphela landa izinhlelo zokusebenza eziqinisekiswe ku-Google Play Isitolo.
Siyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kukusizile ekutholeni impendulo yombuzo wakho. Uma ukuthandile okuthunyelwe noma uma uneziphakamiso noma imicabango efanayo, bese uwaphonsa ebhokisini lokuphawula.
Ezinye izindlela zeTeamViewer